Dowladda oo ku dhawaaqday in Ciidamo gaar ah loo diyaariyay Amniga dorashooyinka - Awdinle Online
Dowladda oo ku dhawaaqday in Ciidamo gaar ah loo diyaariyay Amniga dorashooyinka
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixisey qorshaha xukuumadda ee ku aadan sugidda amniga Doorashooyinka dalka maadaama meelo badan oo kamid ah dalka ay ka dhacayaan dorashooyinka Baarlamaanka labada Aqal.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda amniga Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa shegay in qorshaha amniga doorashooyinka ay dejiyeen, isla markaana dowladda Federaalka & dowlad goboleedyada ay ka wada heshiyeen.
Waxaa uu sheegay in sidoo kale Ciidamo gaar ah loo diyaariyay 11 magaalo oo dalka ah oo la filayo inay ka dhacayaan doorashooyinka, kuwaas oo isigu jira Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM.
Hadalka Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli uu muran ka taagan yahay guddiga qaban lahaa doorashooyinka oo ay kasoo horjeesteen Musharixiinta Mucaaradka, iyaga oo sheegay in laga soo xulay Hay’adda NISA & Shaqaalaha dowladda.
Previous articleBanaanbax ka bilaawday Beledweyne & rasaas lagu furay
Next articleGalmudug oo faah faahisay halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab